Wararka Maanta: Arbaco, Feb 10, 2010-Taliyaha Ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afirca oo sheegay in ay taageero hoose siinayaan Dowladda Soomaaliya
Taliyaha Ciidamada Mareykanka u qaabilsan Afirca oo sheegay in ay taageero hoose siinayaan Dowladda Soomaaliya Arbaco, Feb, 10, 2010 (HOL) Taliyaha Ciidamada Mareykanka u qaabilsan qaarada Africa Ninka lagu magacaabo Wilyam Weel oo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kula kulmay Saraakiil sar sare oo ka tirsan Midowgga Afirca ayaa sheegay in ay gacan hoose ka siinayaan Dowladda Soomaaliya dib u hanashada Amaanka guud ahaan dalka Soomaliya. Taliyaha oo kulan la qaatay Madaxa Amaanka iyo Nabada ee Midowgga Africa Ramtana Lamarma ayaa sheegay in Dowladda Mareykanka waqtiga aysan qorshaha ugu jiray faraglin toos ah oo ay ku sameyso arrimaha Soomaaliya, laakiin waxaa uu sheegay in Mareykanku mar walba diyaar u yahay taageerada dab-ban ee loo fidiyo howlaha Militari ee laga wada gudaha dalka Soomaaliya si loo caawiyo Dowladda ay dagaalladu ku furan yihii ee Soomaaliya. Taliyuhu waxaa uu intaa ku daray in dhinacooda ay ka xanuusnayaan xaalada ka jirta dalka Soomaaliya iyo dhamaatada mar walba ku dhaceysa dadka rayidka ah, waxaana uu intaa ku daray in si taa looga gudbo loo baahan yahay in la soo celiyo Nabad-galyadii luntay. Waxaa kaloo uu sheegay in Ciidamada uu hogaamiyo ee lagu magacaabo Africom aysan amar toos ah u qabin fara galin ay ku sameeyaan xaalada dalka Soomaaliya laakiin waxaa uu sheegay in ay dhici karto in taageero aan toos aheyn in ay siiyaan Ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya. Waxaa kaloo uu intaa ku daray in rabshadaha ka taagan dalka Soomaliya haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjrin ay saameyn toos ah ku yeelan doonto guud ahaan wadamada qaarada Afirca. hadalka ka soo yeeray Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee ku sugan qaarada Afirca Wilyam Weel ayaa ku soo adaaya xili Dowladda Soomaaliya ay wado abaabul la xiriira weeraro ay dooneyso in ay ku qaado goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha ka soo horjeeda. C/raxmaan Diini, Hiiraan Onlinediini@hiiraan.com
Arbaco 10, Feb, 2010 (HOL) Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Yemen ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay 253-qof oo tahriibayaal Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira, kuwaasoo laga qabqabtay gobollo kala duwan. Sheekh Xasan Yacquub Cali oo sheegay inay u diyaargaroobeen dagaallo ay la galaan Dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Ciidamada AMISOM 2/10/2010 2:39 AM EST